Iwo akanakisa mabhuku eakavanzika, runyorwa rwakakwana kwazvo rwemabasa | Zvazvino Zvinyorwa
Chakavanzika mabhuku haamiriri rudzi rwekunyora mune yakasimba pfungwa yezwi. Kunyangwe iwo mazita anozivikanwa kwazvo aine uyu mukwikwidzi ari enhoroondo dzevapurisa, zvinyorwa zvehunhu hunofanirwa kutarisirwa. Kana iyo sainzi yekunyepedzera classics ine anotyisa manhamba (DraculanaBram Stoker, semuenzaniso).
Muzhinji, zvinyorwa izvo muverengi asina chokwadi nezviri kuitika zvinonyanya kupindwa muropa. Zvakawedzera, Vazhinji vevanyori vanotengesa zvakanyanya munhoroondo vave nehunyanzvi hwekuvaka zvakavanzika zvakaoma. Izvi ndizvo zvinoitika paminhenga isingafi yaEdgar Allan Poe kana Agatha Christie. Munguva dzichangopfuura, Stephen King, Stieg Larsson naDan Brown, pakati pevamwe, vakamira.
1 Mabhuku akanakisa eakavanzika
1.1 Iyo Nhema Katsi (1843), naEdgar Allan Poe
1.2 Dracula (1897), naBram Stoker
1.2.1 Context uye pesvedzero pane yazvino tsika
1.3 Gumi Madiki Matema (1939), naAgatha Christie
1.4 Chirongwa uye zvinyorwa
1.4.1 Uye pakanga pasina akasara ...
1.5 Iyo Fog (1980), naStephen King
1.6 Varume Vakanga Vasingade Vakadzi (2005), naStieg Larsson
1.7 Iyo Da Vinci Code (2003), naDan Brown
Pazasi pane yakasarudzika runyorwa rwezvakavanzika zvinyorwa zvemabasa:
Mboro nhema (1843), naEdgar Allan Poe
Poe anoonekwa seanopayona mukati memhando dzakasiyana dzekunyora, kunyanya mune yekuvhiya inoverengeka uye ipfupi nyaya. Zvakaenzana, game Mboro nhema Uyu munyori weAmerica airatidza hunyanzvi hwake mukubata kutya kwepfungwa. Iko kusanganisa kusimba kwekutyisa pamwe nekukanganisa kwepfungwa kwakakonzera imwe yenyaya dzinotyisa dzese nguva (kana isiri yakanyanya).
Hupenyu hwepamba hwezuva nezuva hwevechidiki vakaroora uye yavo yekuvaraidza (katsi nhema) inopfuura nerunyararo rwakakwana. Asi kuwirirana kwemba kunotanga kushanduka nekuti murume anowira mumakutu edoro. Nekudaro, murume uyu anovandudza zviratidzo zvekushushikana kwepfungwa zvakaenzana panguva imwechete iyo kupindwa muropa kwake kuri kuwedzera uye anotanga kunzwa kutambudzwa.
Pikicha ine njodzi yekufananidza inotungamira mukuuraya kweye feline. Pakupedzisira, rugare rwechinguva pfupi runodzoka. Zvakanaka, kuoneka kwekatsi yechipiri kunonamira iyo protagonist zvakare. Mhedzisiro yekupedzisira ishezeen inokatyamadza uye inokatyamadza.
Iyo nhema katsi (ZVAKANAKA ...
Dracula (1897), naBram Stoker
Context uye pesvedzero pane yazvino tsika
Iko kufuridzirwa kwevampire inozivikanwa kwazvo pasirese kwakapfuura kubva panguva yekuburitswa kwenyaya ino yeepistori kusvikira nhasi. Izvi zvinoonekwa kubva pamitambo isingaverengeke yemitambo, firimu uye terevhizheni kuchinjika kwenyaya yeCount Transylvanian. Sezvineiwo, Stoker haana kutanga ngano.
Sezviri pachena munyori weIrish akafuridzirwa kunyora nyaya iyi mushure mekukurukurirana neakakurumbira wehungwaru wechiHungary, Arminius Vámbéry. Ndiani akatsanangura mumwe Vlad Drăculea, uyo asina hukama naVlad III, muchinda weWallachia mukati mezana ramakore regumi nemashanu. Kunyange hazvo, Stoker aivimba nehunhu hwakasiyana hwaVlad III - anozivikanwa sa "mutengesi" - kuvaka kwake kunwisa ropa persona.
Jonathan Harker, gweta diki reBritain, anosvika kuimba yaCount Dracula muTransylvania. Pakutanga, gweta rinogamuchirwa semuenzi, asi rinobatwa mushure mekuona hutsinye hwemunhu anomugamuchira. Mushure mechinguva, Dracula anoenda kuLondon mubhokisi riine ivhu reTransylvanian. MuBritish capital anotanga kuunganidza vakaurayiwa uye kushandura vasikana kuva vampire.
Pakati pavo, Lucy, Harker's fiancée. Iyo yekupedzisira haigone kutiza kutiza kubva ku count castle. Neichi chikonzero, Dr. Van Helsing anoonekwa pachiitiko nevabatsiri vake nebasa rekuuraya vampire. Kunyange zvakadaro, Dracula anokwanisa kutiza kubva kuLondon odzokera kumusha kwake, kwaanozopedzisira aurayiwa mushure mekutambudzwa kwenguva refu uye kunotyisa..
Vatema gumi vadiki (1939), naAgatha Christie
Pamwe, Uye Ezvo Kwakanga Kusina (Uye pakanga pasina kana akasara - zita rekutanga muChirungu) ibasa raAgatha Christie rakanyanyisa uye rinonakidza. Zvechokwadi, Vatema gumi vadiki Iri, kusvika parinhasi, bhuku rinotengesa zvakanyanya nemunyori weChirungu (anopfuura mamirioni zana mauniti). Izvi zviri kutaura zvakawanda mukati mehunyanzvi basa remunyori rakafungidzirwa semutangiri wemhando yemutikitivha.
Vanhu vasere vanobvuma kukokwa kusingadzivisike kwekushandisa zororo pachitsuwa chakaisvonaka cheNegro (kwete zita rake chairo), kubva kumahombekombe eEngland. Iyo inzvimbo yekurota senge inotongwa neimba hombe yemuridzi asingazivikanwe pakati pechitsuwa. Pakusvika, vaenzi havakwazisirwi nevakakoka —Mr. naMai Owen - asi nekuda kwevaranda vake vane mutsa (vaviri vekwaRogers).
Ipapo vaenzi vanowana pamadziro emakamuri avo kwakanyorwa rwiyo rwe "Diez Negritos". Gare gare, panguva yekudya kwemanheru, vanodya vanocherekedza zviyero gumi zvevhu (negritos) pakaunda yekudyira. Zvakare, tepi inoridzwa ichipomera munhu wese aripo - kusanganisira vashandi - yekuita mhosva munguva yakapfuura.
Uye pakanga pasina akasara ...
Mumwe nemumwe vanhu vari mumba vari kutsvairwa nemhondi yekunyepedzera. Pamwe pamwe nekufa kwega kwega, imwe yevatema vevhu yakanyangarika. Sezvo chiito chakabatikana uye chinonetsa chinosvika pakugadziriswa, zviri pachena kune vakapona kuti mhondi iri pakati pavo. Zvisinei, ihwohwo husiku hwemhepo ine dutu ... hapana anogona kutiza chitsuwa.
Vatema gumi vadiki
Mhute (1980), naStephen King
Mist --Original title in English - nderimwe remabasa anoyevedza ezana ramakore rechiXNUMX “master of terror”, Stephen King. Kuisa, muverengi wenyaya iyi akabatanidzwa nerondedzero yehutsi gobvu rinofukidza guta reBrigton, Maine, USA. Ichi chiitiko chemuchadenga chinoitika mukati memangwanani mushure memhepo ine simba yemanheru.
Uyewo, kuoneka kwakashata kunobva muhutsi kwakaunza pamwe nekuonekwa kwezvisikwa zvinotyisa zvinorwisa vanhu mudzimba dzavo. Muchirevo chechinyorwa chino, vanopokana uye vanovhiringidza protagonists yenyaya iyi vanoramba vakavanda mukati mechitoro. Ikoko, ivo vanotanga kujekesa kuti pamwe mavambo emamonya angave akave akakundikana kuyedza kwemauto.
Iyo Mist (Chirungu ...
Varume vasina kuda vakadzi (2005), naStieg Larsson
Iri bhuku ndiro rekutanga mune rakakurumbira Millennium trilogy (rakaburitswa post mortem) nemunyori weSweden Stieg Larsson. Iyo inoverengeka yematsotsi inotarisana nemutori wenhau Mikael Blomkvist, uyo anopomerwa kusvibisa magnate Hans-Erik Wennerström. Zvino - kutora mukana wemamiriro ezvinhu akaoma - Henrik Vanger (anokosha muzvinabhizinesi weSweden) anopa chibvumirano kumutori wenhau.
Mukutsinhana neruzivo rwakakodzera paWennerström, Mikael anofanira kuburitsa bhuku reVanger. Uyezve, Blomkvist anofanirwa kugadzirisa kupokana kwe1966 kuparara kwaHarriet, muzukuru waHenrik. Sezvo mutori wenhau anoenderera mberi mukuferefeta kwake, humwe humbowo hwenzira yeHarriet uye zvakapfuura zveNazi zvevamwe vemhuri yeVanger zvinoratidzwa
Varume vasina kuda ...
Iyo Da Vinci Kodhi (2003), naDan Brown
Iri zita rakaratidza shanduko mune basa remunyori weAmerica Dan Brown. Zvemukati zvayakakonzera kukakavara kukuru nekuda kwezvikamu zvaro paGreek Grail uye Opus Dei. Kunyanya, zvirevo zviri muchinyorwa nezve basa raMaria Magadharini mukati mechiKristu zvakakonzera kushorwa kweChechi yeKaturike.
Aya mamiriro ataurwa akanyanya kuwedzera ruzivo rweveruzhinji nezve iri basa. Pari zvino, Iri nderimwe remabhuku anotengwa zvakanyanya emireniyumu nyowani pasi rese nekuda kwemakopi ayo anopfuura mamirioni makumi masere akatengeswa. Senge dai izvo zvaive zvisina kukwana, mukwikwidzi weAscar Oscar Tom Hanks anotungamira mukutungamira kweyemafirimu
Chinyorwa chinorondedzera kutsvagurudzwa kwaRobert Langdon -Harvard muzvinafundo nyanzvi yezvechitendero - kutenderedza kuponda kusingazivikanwe kwaJacques Saunière, muchengeti weLouvre Museum. Mubatsiri wake mune iyi kesi mumiriri wechiFrench Sophie Neveu, muzukuru wemushakabvu.
Pamwe chete ivo vachararama rwendo runonetesa kubva kuParis kuenda kuLondon vachitsvaga mhinduro. Kunyange zvakadaro, padyo pavanenge vari kugadzirisa zvese zvakavanzika zvinomisikidzwa, kutyisidzira kunova nenjodzi. Icho chikonzero: chakavanzika chinoburitswa chine simba rekuburitsa seism mune iyo yose pfungwa yenhoroondo yechiKristu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku akanakisa eakavanzika
Kubva pane urwu runyorwa ndainyanya kuda "Iyo Nhema Katsi" uye "Iyo Da Vinci Code" inoshamisa.
P. Bernal akadaro
Zvirinani "Gumi negritos" inofungidzirwa mushe munzvimbo yekunyora. Iyo zano ibasa rehunyanzvi. Uye "Iyo Da Vinci Code", iyo novel, kwete iyo bhaisikopo, haigone kuve yakanyanya kupindwa muropa.
Pindura P. Bernal